Ndị na -emepụta ọgba tum tum na ndị ọgba tum tum | China Motorcycle ekpuchi Factory
Mkpuchi ọgba tum tumnwere ọtụtụ aha dị iche iche dịka, mkpuchi ọgba tum tum, uwe ọgba tum tum, carport ọgba tum tum na ihe ndị ọzọ. N'ebe a anyị na -akwado ụdị mkpuchi ọgba tum tum abụọ, otu bụ nnukwu ụdị ọlaọcha. Ọ nwere ike idobe ụgbọ ala dị iche iche na-akwaga ebe dị mfe, chebe ụgbọ ala gị ka ọ ghara uzuzu, ájá, ájá, mmiri ozuzo, snow, ifufe na ntu oyi, ma gbochie ndị bịara abịa imetụ aka na mmetọ site na nsị anụmanụ.
Mkpụrụ ọgba tum tum mkpanaka na -ekpuchi ọdụ ụgbọ ala
Mkpuchi ọgba tum tum a nwere ike ịchekwa obere ọgba tum tum obere na ọkara, na-echebe ụgbọ ala gị site na uzuzu, ájá, gravel, mmiri ozuzo, snow na ifufe, wee gbochie ndị bịara abịa imetụ aka na mmetọ site na nsị anụmanụ. Ọdịdị ahụ dị mfe ma dịkwa mma, nwere ikike teknụzụ siri ike.
Na -ekpuchi ọgba tum tum na -anọ otu ebe
Ebe a na-adọba ọgba tum tum nwere ike ịpasa nnukwu ọgba tum tum dị iche iche, chekwaa ụgbọ ala gị site na uzuzu, ájá, ájá, mmiri ozuzo, snow na ifufe, wee gbochie ndị bịara abịa imetụ na imetọ nsị anụmanụ.
Enwere ike idozi ya n'ala dị larịị ma ọ bụ tinye ya na ụgbọala na -adọkpụ. IQ, Ọdịdị ya dị oke mma, na imewe ahụ nwere mmetụta siri ike nke teknụzụ.Ndị ọzọ bụ ụdị ọcha anyị pere mpe, Ọ nwere ike ịchekwa obere locomotives dị obere na ọkara. Njirimara ndị ọzọ dị ka ngwaahịa gara aga. Mana agba na imewe dịtụ iche. Ị nwere ike ịmata ma họrọ site na foto dị na nkọwa.